Ndenza ntoni ukuba i-smartphone yam iwele emanzini? | Iindaba zeGajethi
Ndenza ntoni ukuba i-smartphone yam iwele emanzini?
Namhlanje, abavelisi abaninzi baya besenza isigqibo khusela izixhobo zakho kufuma okanye ulwelo. Nokuba ngokusemthethweni kunye neziqinisekiso IP67 o IP68, Kuxhomekeka kwifayile ye- inqanaba lokumelana namanzi nothuli, okanye ngokungafanelekanga, ngokusebenzisa iiglu kunye neebhotile zerabha, abavelisi ngokwabo bacinga ngakumbi nangakumbi yonke imihla ukuba sisebenzisa iselfowuni kwiindawo ezahlukeneyo, sonyusa umngcipheko wokonakaliswa.
Ii-iPhone 6s, umzekelo, zibandakanya utshintsho loyilo olunika ukumelana okungaphezulu kwamanzi, kodwa yayikukufika kwe iPhone 7 xa I-Apple iqinisekiswe ngokhuseleko lwe-IP67 ukumelana namanzi nothuli. Iimodeli zamva nje Xs kunye neeXs Max, Sele benokhuseleko IP68. Kodwa, ngaphandle kokukhuselwa kweetheminali zethu, Kufuneka senze ntoni xa i-smartphone yethu iba manzi?
Owona mzuzu umbi xa i-smartphone yethu iwela emanzini okanye iba manzi. Uloyiko luya kuba nomsindo, kwaye akumangalisi oko. Isixhobo se-elektroniki, nokuba siqinisekisiwe i-IP okanye akunjalo, sinokuyeka ukusebenza mzuzu xa simanzi, kodwa kufuneka sisoloko sizama ubuncinci khipha ulwelo kwaye, ngaphezu kwako konke, ukufuma okuveliswe ngaphakathi kwesiphelo. Inkqubo ye- Eyona ndlela ixhaphakileyo Ayikho enye ngaphandle kweklasikhi ilayisi. Emva koko siza kuyichaza ngokweenkcukacha, sigxile kwimeko yokuba ulwelo olumanzise iselfowuni yethu ngamanzi.
1 Indlela yerayisi
2 Isiphelo sam simanzi kwaye asizukuvula, ngaba sophukile?
3 Isixhobo sam sivuliwe, kodwa isikrini asisebenzi
3.1 Ndingasomisa isixhobo esimanzi ngesixhobo sokwenza iinwele?
4 Kwaye ngoku ndisilungisa njani isixhobo sam esimanzi?
5 Ndingayifihla into yokuba isixhobo sam simanzi?
Ngabantu abaninzi kuyaziwa ukuba uninzi ezingabizi, ezilula nezisebenzayo Kwimeko apho isiphelo sendlela siwela elwandle, yeyona irayisi. Ukuba isixhobo esiphathwayo siya kuba manzi, amanyathelo aya kulandelwa aya kuba:
Sicime iselfowuni kwangoko. Sukujonga ukuba iyasebenza ngelo xesha, njengoko ingxaki inokuba mandundu kude kube sekufeni kwesiphelo.
Sikhuphe iSIM khadi kwaye, ukuba ixhotyisiwe, isiciko sebhetri kunye Ibhetri ngokwayo.
Somisa itheminali ngaphandle usebenzisa ilaphu elithambileyo, elingakhuhlekiyo.
Kwaye nantsi into efika kulo mbandela: kufuneka sifake isixhobo kwisitya kunye nerayisi. Ewe kunjalo, indlela iya kusebenza ngakumbi ukuba irayisi igubungela i-terminal ngaphandle kokuveza nantoni na.
Ngoku sinayo kuphela linda de ukufuma kwerayisi kufume ekwenzeni umsebenzi wawo, kwaye uthabathe ukufuma ngaphakathi mobile ngayo. Khumbula ukuba kubaluleke kakhulu ukuba ungavuli iselfowuni ngaphandle kokuba kukho imfuneko enkulu.
Kuyacetyiswa tshintsha irayisi ubuncinci qho kwiiyure ezili-12 ukuze amandla ayo okufunxa anganciphi.
Emva kokwenza le nkqubo, ifowuni inokuphinda ibuyele ebomini, kodwa eyona nto iqhelekileyo kukuba yonakele ngaphakathi, ilahlekelwe yimisebenzi ethile. Amanzi atshona apho adlula khona, kunye nezinto ezinje nge botones, la ikhamera Ngaphezu kwayo yonke loo nto Isandisi-lizwi, baya kubandezeleka inyathelo lakhe kwaye aziyi kusebenza ngokufanelekileyo, mhlawumbi okwexeshana, okanye ngokuqinisekileyo. Kodwa okwangoku, kwaye kwimeko yokusindisa ngokuyinxenye iselfowuni, sinokuhlala sihlala zama ukugcina idatha ngaphakathi kwaye sele ndigqibe ngento emakwenziwe.
Nangona okwangoku kufuneka sahlule phakathi kwamanzi acocekileyo kunye amanzi anetyuwaKuba ityuwa yale yokugqibela inayo amandla enkulu bako, ezichaphazela iindawo ezithile zentsimbi ngaphakathi kweselfowuni, ezinje ngezihlanganisi ezithile okanye kwibhodi yomama, ke le nkqubo ayizukusebenza ngokufanelekileyo. Ukusuka ekulahlekelweni ngumlambo, kwaye ngesixhobo esonakalisiweyo, naliphi na ilinge lokulivuselela lilungile, nangona kule meko Kuya kufuneka siphindaphinde inyathelo lokugqibela amatyeli aliqela ukususa umswakama kangangoko kwaye, ngaphezu kwako konke, ukwenza ngokukhawuleza ukuphepha ububi obukhulu.
Isiphelo sam simanzi kwaye asizukuvula, ngaba sophukile?
Sinokubonakala ngathi siyanyanzelisa, kodwa eyona nto ibalulekileyo ekufuneka siyikhumbule kukuba kufuneka cima i-terminal ngokukhawuleza okukhulu, ukuba iyaqhubeka nokusebenza, okanye sukuzama ukuyilayita ukuba icinyiwe. Ngexesha elinje kunye noxinzelelo oluninzi, asinakukhumbula le nkcukacha, kodwa inokuba ngumahluko phakathi kokugcina iselfowuni okanye ukuyikhokelela ekufeni okuthile. Khumbula, Umbane namanzi ayizizo izihlobo ezilungileyo, ke kungcono ukhethe ukuphilisa impilo. Kodwa ukuba emva kokumanzi kwaye wenze indlela yelayisi ayisebenzi okanye ayivuli, kunokwenzeka ukuba ifumene umonakalo omkhulu, kodwa sinokujonga ukuba sinethamsanqa kwaye khange ibekho ngobuqhetseba obuncinci .
Isixhobo sam sivuliwe, kodwa isikrini asisebenzi
Ukuba isikrini asisebenzi, kufuneka sizibeke kweyona nto imbi kakhulu. Ukuba emva kokumanzi isikrini asivuli kwaye asifumani mpendulo kumboniso, sinokuqala ukucinga ngokutshintsha iselfowuni, nangona sisenakho ukuqiniseka. Kulula njengokukhangela indlela yokufumana inkuthazo evela kwiselfowuni. Olona khetho lulula lelokuba kukho umntu osibizayo, kodwa kwimeko yokuba unekhowudi ye-PIN okanye uthule iselfowuni, ayizukukhala okanye yenze nantoni na. Inyathelo elilandelayo liya kuba qhagamshela kwikhompyuter. Ukuba iyasiqonda isixhobo, ubuncinci siyazi ukuba siyasebenza, nangona singenakubona kwanto kwiscreen.
Kule meko, kuxhomekeke kumntu ngamnye isigqibo sokuba wenze ntoni ngesixhobo. Inketho yenkonzo yaseburhulumenteni ihlala ikhona, kuthathelwa ingqalelo ukuba i-invoyisi, kwimeko yokulungiswa, iya kuba nkulu. Ngaphandle koko kwaye ukuba uzibona ukwazi, unokwazi zama ukuzilungisa ngokwakho, ujonge iziqwenga kunye nezifundo ezilandelayo ozifumana kwiwebhu.
Ndingasomisa isixhobo esimanzi ngesixhobo sokwenza iinwele?
Singacinga ukuba umoya oshushu uya kwenza ukuba amanzi anyuke ngokukhawuleza ngaphakathi kweselfowuni. Kodwa masigcine engqondweni ukuba umoya oshushu Ukuphuma kwindawo eyomileyo kune amaqondo obushushu aphezulu kunalawo anokumelana nefowuni ephathekayo phantsi kweemeko eziqhelekileyo. Singazitshisa iinxalenye ezithile zeselfowuni emva koko, dala umonakalo ongenakulungiswa.
Nangona kuyinyani ukuba ezinye izomisi zivumela umoya ukuba uphume kubushushu begumbi, ayicetyiswa nokuba, kuba nakweyiphi na imeko sinakho ukwandisa amanzi ngaphakathi kwesixhobo, ukuyenza ukuba ifikelele kwiindawo ezininzi kwaye ekugqibeleni yonakalise izinto ezazingaziwa zisempilweni ngokungazi. Kungcono ke masilibale malunga nokomisa, kwaye masihlale sinyanisekile kwindlela yerayisi.
Kwaye ngoku ndisilungisa njani isixhobo sam esimanzi?
Ityala ngalinye lahlukile, ke kuya kufuneka yenza uxilongo ukwazi ukuba yintoni eyaphukileyo. Siphulukana nanto ngokuphinda indlela yelayisi elinye ixesha kwaye ubone ukuba sinethamsanqa, kodwa ukuba sele siyiphindaphindile amaxesha ambalwa, inyathelo elilandelayo kukuvavanya inqaku ngalinye lefowuni ukubona ukuba yintoni esebenzayo nengasebenziyo. Ukuba ukusilela ngokubanzi (umzekelo, ayivuli kwaye ayiphenduli nantoni na), ityala liyinkimbinkimbi kwaye kuya kufuneka Ukucinga ngeselula entsha. Kodwa ukuba sibona ukuba ikhamera inkungu kwaye ayijongi kakuhle, kufanelekile jonga isifundo yamakhulu akwiinethiwekhi, thenga iinxalenye kumthengisi onokuthenjwa nothembekileyo kwaye sizazise ngokwethu sizilungise ngokwethu.
Ewe kunjalo, kuya kufuneka sithathele ingqalelo ukuba izifundo esizifumanayo kumaphepha akhethekileyo afana ne-iFixit zenziwe ziingcali, kwaye zijolise kubantu abaneengcinga ezisisiseko zokulungiswa kwe-elektroniki. Into yesibini kukuba ngokucacileyo siza kuphulukana newaranti, nangona xa isixhobo simanzi, siyakucinywa ngokuthe ngqo, njengoko sichaza apha ngezantsi.
Ukuba asiqhelananga nezixhobo zangaphakathi zombane, kungcono ukuba silibale ukuzilungisa ngokwethu kunye qhagamshelana nenkonzo yobugcisa. Kuyimfuneko nokwazi ukuba ukuvula nokulungisa isixhobo esintsokothileyo se-elektroniki, ibhokisi yezixhobo esihlala sinayo ekhaya ayisisebenzisi, kodwa kuya kufuneka sizibonelele izixhobo ezithile, ezinje ngezixhobo esibizwa ngokuba yi-magnized pentalobular screwdrivers ukuze sikwazi ukuthambisa izikrufu esincinci esiza kusifumana.
Ndingayifihla into yokuba isixhobo sam simanzi?
Impendulo icace gca ngama-99% exesha: hayi. Ewe kunjalo, abavelisi bahlala inyathelo elinye phambi kwabasebenzisi, kwaye ukunqanda iingxaki ukubonelela ngeetheminali eziphathwayo ezinye izikhombisi zoqhagamshelwano ezingamanzi. Abayonto ngaphandle izitikha ezincinci ezimhlophe, ojika umbala obomvu xa udibana nolwelo. Siyazi ukuba kwezinye iimeko, kuphela kukunxibelelana nokufuma, njengakwigumbi lokuhlambela ngexesha lokuhlamba, banokutshintsha umbala, nokuba bengemanzi kwisiphelo. Ke ngaphandle kwamathandabuzo zithambile.
Ayisiyiyo eyona ixhaphakileyo, kodwa kungenzeka ukuba ikhona. Ukuba sijonga ukuba isibonisi sijike sabomvu, iya kuba Inkcitho yexesha ukuzama ukugqunywa liwaranti yomenzi, kuba kwiimeko ichaza ngokucacileyo ukuba, nakwizixhobo ezikhuselweyo nge-IP, isiqinisekiso asisebenzi kwimeko yokuba simanzi, sityhola ukusetyenziswa gwenxa okufanayo.
Masinyaniseke. Akukho mntu uyithandayo iselfowuni yabo ayithandayo ekunzima ukuyifumana ngengozi, nokuba sisiphelo esine-IP67 okanye isiqinisekiso esingangenisi manzi se-IP68. Ukuba simanzi, nokuba iyaqhubeka nokusebenza, Olona khetho lulungileyo kukuyicima, landela indlela yerayisi kwaye ulinde. Isitshixo ngu nomonde.
Kwimeko apho ingekasebenzi emva kweli xesha, kuya kufuneka sifumane unobangela. Ukuba siyifumana ngokucacileyo, sinokugqiba ekubeni siyithathele inkonzo okanye siyilungise ngokwethu. Kwimeko apho kungekho nto isebenza, eyona ilungileyo yiya kukhangela i-terminal entsha njengendawo ebambeleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ndenza ntoni ukuba i-smartphone yam iwele emanzini?